Notsapainay tsara ny Doogee DG280 LEO | Androidsis
[Horonantsary] Doogee DG280 Leo famerenana, ny Android eo anelanelany latsaky ny 80 euro
Androany dia tiako haseho anao ny toetra ara-teknika rehetra ary koa ny fampiasana ny rindranasa sy ny lalao amin'ity terminal vaovao an'ny orinasa sinoa ity. Doogee izay tato ho ato dia resahina be loatra amin'ny famoronana terminal amin'ny sasany famaritana teknika tsy mampino amin'ny vidiny mirary mihoatra ny antonony.
Ny anaran'ny terminal dia mamaly ny nomenclature an'ny Doogee DG280 na fantatra amin'ny anaram-bosotra hoe Doogee leo, terminal iray manontolo izay azontsika ampidirina ao anatin'ny elanelam-potoana Android, na dia misy aza ny vidin'ny antsinjarany izay ao anatin'ny faritra ambany Android. Vidy amidy ampahibemaso izay ho azontsika sahabo ho 80 Euros sahady no ao an-tranonay.
1 Famaritana ara-teknika amin'ny Doogee DG280 «LEO»
2 Zava-nisongadina tamin'ny Doogee DG280 LEO
3 Ny tsy tiako amin'ity Doogee DG280 LEO ity
Famaritana ara-teknika amin'ny Doogee DG280 «LEO»
efijery 4'5 "IPS misy vahaolana 450 x 854 pixel
processeur Mediatek MT6582 QuadCore amin'ny 1 Ghz
GPU Mali 400 Mp2 fototra roa ao amin'ny 5oo Mhz
Fahatsiarovana anatiny 8 Gb azo velarina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 32 GB
Fakan-tsary Rear 5'04 Megapixels misy flash LED natsangana
Fakan-tsary aloha 1 Megapixels
Conectividad Bluetooth 4.0 - Wifi - GPS sy A-GPS - tamba-jotra 2G sy 3G
bateria Azo esorina 1800 mAh Li-ion
vidiny 80 Euro ny vidin'ny fandefasana
Zava-nisongadina tamin'ny Doogee DG280 LEO
Anisan'ireo olana tiako hasongadina Doogee DG280 LEO, terminal izay tena atoroko amin'ny sanda vidiny sy ho an'ireo mpampiasa Android na mpampiasa mpampiasa izay mampiasa ny terminal Android ho an'ireo zavatra fototra indrindra azontsika eritreretina, izay matetika ampifandraisina sy ampahafantarina ny zava-mitranga rehetra amin'ny tambajotra sosialinay, milalao amin'ny sasany lalao Android hafa, andefaso sy handraisana WhatsApp, Telegram, Line na inona na inona tianao ho fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo, maka sary eny ivelany, jereo ny kaonty mailaka anay, henoy ny mozika ankafizinay na koa jereo ny andian-tsarimihetsika tianay amin'ny fampiononana atolotry ity terminal Android ity irery ihany 4,5, efijery IPS izay teboka tsara indrindra amin'ny terminal manontolo miaraka amin'ny kalitaon'ny feo avo.
Etsy ankilany, azontsika atao ny manasongadina ireo asany miampy izay manome antsika ny fahafaha-manao mifandraisa amin'ny terminal anay amin'ny alàlan'ny fihetsika mivantana eo amin'ny efijery fanidiana ny terminal. Azontsika atao tsara ny mamaha ny terminal amin'ny alàlan'ny fikasihana roa sosona tafiditra ho fenitra ao anaty toe-javatra, na afaka miditra mivantana aza isika, tsy manokatra ny terminal akory aza, ireo fampiharana tiantsika na be mpampiasa indrindra indrindra toy ny Dialer an'ny Android -ntsika, ny mpitety tranonkala, ny fampiharana hafatra na ny fakantsarintsika manokana Doogee DG280.
Lafiny iray hafa izay tiako hidera izany Doogee DG280 LEO, izay tadidintsika fa afaka mahazo vitsivitsy 80 Euros napetraka tao amin'ny adiresinayIzy io dia ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana an'ity smartphone finday maivana sy mora ampiasaina ity, ireo fitaovana izay, na dia plastika aza izy ireo dia manome azy io ny sarany lafo indrindra. Zava-dehibe indrindra hanasongadinana izany akoran-damosina mikitroka bitika namboarina manokana hanaparitahana ny hafanana sy handraisana ny rano mitete kely hatramin'ny 1,20 metatra ny haavony.
Ny tsy tiako amin'ity Doogee DG280 LEO ity
Anisan'ireo lafiny tokony hitsikerako an'io Doogee DG280 LEO, ny tena lehibe amin'izy ireo dia ny fizarazaran'ilay rafitra ampiasaina na tavela amin'ny fametrahana rindrambaiko sy lalao, fizarazaran'izay Namela anay 1,44 Gb fotsiny izy ireo hametrahana lalao sy rindranasa. Vitsy kely izay hataontsika manery ny fampiasana ny rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo hamindra data lehibe amin'ireo rindranasa napetraka ao amin'ny memoara ivelany na MicroSD.
Lohahevitra iray hafa tiako horesahina koa ny kalitaon'ny fakan'ity Doogee DG280 ity, terminal izay miaraka amina fakantsary 5.04 megapixel dia afaka amin'ny toe-jiro tsara, maka sary tsy mampino ary manana kalitao azo ekena kokoa raha ampitahaintsika amin'ny terminal any amin'ny elanelam-bidin'izany ihany. Na dia miharatsy sy miharatsy aza ny raharaha raha ny fakana sary ao anaty trano misy jiro ambany na amin'ny sary amin'ny alina no tadiavinay.
Mba hamaranana dia lazao azy ireo izany ny terminal dia mazava tsara mendrika izany ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mitady fantsona fototra amin'ny vidiny latsaky ny 100 euro. Fantsona iray misy famolavolana tanora sy fitaovana fampiasa amin'ny kalitao izay ametrahana azy ireo ny mari-pahaizana teknika iray amin'ireo terminal tsara indrindra amin'ny elanelam-bidy mihetsika, satria raha milaza aminao aho amin'ity Doogee DG280 ity dia manana Android midadasika manontolo isika amin'ny vidiny Android ambany.
Izao dia afaka vidio ny Doogee DG280 LEO amin'ny vidiny 75,25 Euros fotsiny .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » [Horonantsary] Doogee DG280 Leo famerenana, ny Android eo anelanelany latsaky ny 80 euro
Ary ny fanavaozana ??? Tsy mampaninona ahy ny manana telefaona finday tsy misy marika, fa mampaninona ahy ny manavao ahy ny rafitra mandritra ny 1-2 taona farafaharatsiny.
Ny trano tokana manome toky anao ireo fanavaozam-baovao ofisialy mandritra ny roa taona ao amin'ny faran'ny sarany io dia ny Motorola sy ny Moto E. Ireo orinasa mpamokatra hafa, anarana toa Samsung, Lg, Sony, HTC sy ny hafa, tsy hahita ambany ianao- terminal eo afovoany izay azonao amin'ny fiainanao fanavaozana ofisialy ny Android vaovao.
amin'ity finday ity dia heverinao fa mifaninana amin'ny LG, Samsung, sns. (Amin'ny fari-pahaizana mazava ho azy!) Hatramin'ny nanaovako fikarohana momba ny vidiny (any Mexico) ary TSY manana fahatsiarovana 1GB ireo, saika 512 MB avokoa izy ireo ary 1GHZ ny mpikirakira ary ity finday ity dia QuadCore 1.3GHZ, havaozina be OS koa!
Azonao atoro ve ity telefaona finday ity nefa tsy latsaka ao anatin'ny haavon'ny telefaona sinoa fa vetivety dia tsy manompo azy ireo ny bateria dia tsy tsara ny vahaolana sns
Misaotra sy arahaba…
Araka ny nolazaiko tao amin'ilay namana an-dahatsary, terminal iray tena atolotra tsy misy ifandraisany amin'ny marika sinoa tsy dia malaza izy io, Ary koa amin'ny magazay amin'ny Internet dia afaka mividy kojakoja toy ny bateria amin'ny vidiny mampihomehy tokoa ianao Ohatra, ny batery iray ho an'ity Doogee DG280 LEO ity dia mitentina 4,99 Euros
Tsy misy isalasalana, fantsona be soso-kevitra indrindra mifandraika amin'ny kalitao / vidiny.
popo dia hoy izy:
manana outlet TV ve izy manana mhl
Mamaly an'i popo
Enriquekohnen dia hoy izy:
Amin'ny Android dia tsy ilaina ny mametraka rindrambaiko, hametraka programa mivantana ao amin'ny micro SD, mankany amin'ny fampiharana ianao ary misy ny safidy hamindra ny zava-drehetra amin'ny karatra na fitahirizana rafitra.
Mamaly an'i enriquekohnen
Quiroga Jorge dia hoy izy:
Manahoana ianao, tsy afaka mifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny puce aho, mety hahasoa raha nohazavainao tamiko izany, nanandrana roa andro aho izao, misaotra ny doogge 280
Mamaly an'i quiroga jorge
Novakiako ilay finday DG280. Finday mahery vaika io. Nampitahainiko tamin'ny Samsung g355m izay novidian'ny rahalahiko fotsiny, ary na dia tsara aza ny Samsung, dia mazava fa haingana kokoa ny Doogee (manana 1.3 cores manohitra ny 1.2 an'ny Samsung ary fahatsiarovana 1 GB amin'ny Samsung megabytes sahabo ho 750 fa heveriko fa fa ny fahombiazan'ny Doogee ambony dia tsy mamaly an'io fotsiny). Miresaka an'ity finday ity ianao ho sahaza ho an'ny olona mila zavatra fototra ... Tsy azoko an-tsaina hoe inona no iorenanao an'izany. Ity finday ity dia ho an'ireo izay mila tombontsoa lehibe indrindra. Ny fampiasa dia omen'ny kinova napetrakao amin'ny Android ary ity finday ity dia manana 4.4. Ny fitaovana rehetra dia miasa tanteraka ary tsy misy fotoana latsaka ambanin'ny Samsung voalaza etsy ambony. Misalasala aho fa misy finday izay manana an'izany tombontsoa izany ankehitriny, ary tsy miresaka momba ny ambany na salantsalany no tiako hambara, ny tiako holazaina dia ny ambaratonga avo indrindra misy mandraka ankehitriny. Raha IPhone na Nokia no ampitahaintsika, dia sarotra kokoa ny fampitahana satria samy manana ny rafitra fiasan'izy ireo izahay, ary amin'io lafiny io, milaza fotsiny fa ny finday misy ny rafitra Android dia mety hifindra any amin'ireo rafi-piasana hafa maimaimpoana, izay ataoko aza mieritreritra ilay antsoina hoe diso tafahoatra. Ny farany, ny vidiny ambony ihany. Androany, tsy hitako fa manana tombony lehibe kokoa izy ireo.
tafandria mandry, nividy an'ity terminal ity aho, fa anio rehefa manandrana maka sary dia miseho mivantana amiko ilay fakantsary eo anoloana, ary tsy hitako ny safidy hivadika any aoriana. Afaka manampy ahy ve ianao?
vakana mavo dia hoy izy:
Salama. Tsy azoko atao ny mandray ny mariky ny signal internet. Mipetraka any Arzantina aho. afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i rosario
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, resipeo fandrahoan-tsakafo
Ao amin'ny Android izao ny RPG One Piece Treasure Cruise maimaim-poana miorina amin'ny manga an'i Eiichiro Oda